जाडोमा आगो, हिटर बाल्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ? « Drishti News – Nepalese News Portal
जाडोमा आगो, हिटर बाल्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?
१४ पुस २०७८, बुधबार 5:28 pm
यस्तो बेलामा स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। सही हेरविचार पुर्‍याउन सकिएन भने बिरामी पर्ने संभावना रहन्छ। चिसोबाट बच्न तातो र झोलिलो खाना खाने, न्यानो लुगा लगाउने, सुत्ने कोठालाई तातो बनाउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।
चिसोबाट बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरु बढी प्रभावित हुने गर्छन्। त्यसैले उनीहरुको विशेष हेरचाह गर्नुपर्छ। चिसोबाट बच्न अधिकांश मानिसले आगो ताप्ने, हिटर वा कोइला बाल्ने गर्छन्। यिनीहरुको प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउन भने बिर्सनु हुँदैन। सानो लापरवाहीले ज्‍यान जान समेत बेर लाग्दैन। त्यसैले यस्ता जाडोका सहयोगी तर उपयोग गर्न नजान्दा ज्यानै लिने उपकरणको प्रयोग गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
आगो ताप्दा वा हिटर बाल्दा कागज, कपडा जस्ता छिटो जल्ने खालका सामाग्री नजिकै राख्नु् हुँदैन। आगो तापिसकेपछि त्यसलाई पूर्ण रुपमा निभाइदिनुपर्छ। जाडो याममा शरीर वा कोठालाई न्यानो बनाइराख्न आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने, गिजरको प्रयोग गर्नेलगायतका उपायहरु गरिएपनि पर्याप्त सावधानी नअपनाउँदा अप्रिय घटनाहरु हुने गरेका छन् ।